Filasho Daacadnimo Ayaa Keena Qancitaanka Macaamiilka | Martech Zone
Rajooyinka Daacadnimo Ayaa Keena Qancitaanka Macaamiisha
Khamiis, Agoosto 28, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Dhawrkii sano ee la soo dhaafey waxaan ka shaqeeyey jawi farsamo bilowga culeys-maskaxeed. Laba arrimood oo runtii ku shiraya bilowga ayaa ah la'aanta rajooyin macquul ah oo ku saabsan suuq-geynta iyo habka iibinta iyo sidoo kale wadista astaamaha cusub ee loogu baahan yahay rajada. Isku darka labadan qatar ayaa curyaamin kara shirkadaada hadaadan isku dheelitirin inaad horumar la sameyso macaamiisha horeyba kalsoonidaada kuugu qabay.
Muujinta riix ka dib muuqaalka si loo cayrsho rajada soo socota halka rajooyinka laga seegay saldhiggaaga macmiilka ee hadda waa ciyaar khatar ah. Waxaan ku arkay dhowr shirkadood waligeyna ma arkin inay run ahaantii ka shaqeyneyso inay bilow u noqoto heerka xiga.
Waa isku-darka qanacsanaanta iyo soo-saarista muuqaalka horumarka oo si caqli-gal ah u dhisi doona ganacsigaaga. Waa inaad u wareejisaa baarka labada jiho si aad u guuleysato.
Waa kuwan fikrado dheeraad ah:
Haddii aad tahay shaqaale hoose oo si dhakhso leh u koraya, luminta saacadaha iyo saacadaha si aad u qanciso macaamiisha murugaysan ee aan filashooyinka si sax ah loo dejin ayaa kaa gaabin doonta, haddii aysan kaa hor istaagin.
Haddii astaamahaagu maqan yihiin, iibso daacadnimada, aragtida, hoggaaminta iyo shaqaalaha shirkaddaada. Dad waaweyni wax walba way samayn karaan.
Ha u balan qaadin astaamaha intaadan haysan. Waa caadi in lala hadlo dib-u-dhacaaga, laakiin bixinta taariikhaha adag ee keenista ee nidaamka iibku waa ballan-qaadyo laguu qaban doono.
Haddii ay jiraan macmiil ku tiirsan, la xiriir iyaga si wax ku ool ah oo hubi in macaamiishaadu ay fahmaan cawaaqibka ka dhalan la'aanta waajibaadka ka saaran iibka iyo nidaamka hirgelinta.
U daa qolka qalad. Dib-u-dhac ayaa dhici doona, khaladaad ayaa dhici doona, cayayaanka ayaa kor u qaadi doona madaxooda foosha xun. Hubso in jadwalkaagu u oggolaado dhammaan waxyaabaha kor ku xusan.
Ha u ogolaanin macaamiishaadu inay qeexaan jadwalkaaga, haddii kale waxaad qaadaneysaa masuuliyad markaad daahdo. Way ka fiican tahay in la sameeyo oo si sax ah loo saxo halkii laga fiicnaan lahaa goor dambe ama khalad hore.
Anshax mari shaqaalahaaga iibka ah oo iyaga dusha u saaro mas'uuliyadda rajooyinka beenta ah ee la dejiyey. Dhibaatada ha u sii dhiibin khadka wax soo saarka. Caddaalad ma ahan in qof kale uu fuliyo ballan qaad cilladaysan.
Nadiifi alaabtaada suuqgeynta. Way fiicantahay in la ballaariyo eraybixintaada suuqgeynta, laakiin ha u ballan qaadin wax soo saarka, astaamaha, sii deynta, waqtiyada, ama adeegga aadan awoodin inaad si dhab ah u fuliso.
Ogeysii macmiilka isla marka mashruucu ka baxo qorshaha. Waa lagama maarmaan in macmiilku ogaado xaqiiqda waxa dhacaya. Marar badan, macaamiisha waxay ogaadaan waqtiga kama dambaysta ah inaysan sameyn doonin. Sida raadadka domino-ga, tani waxay burburin kartaa qorshayaal dhowr ah oo wabiga hoose mara oo shirkaddaadu aysan ka warqabin.
Tags: masiixigasuuq-geynta suuqaBuugaagta Suuqgeyntadhacdooyinka suuqgeyntaXeerarka QRreadingqaraaradabarnaamijyada abaalmarintaabaalgudyosuuqgeynta kiniiniga
Eraygaagu Ma Tirin Doonaa Booqashooyinka Saameynta Leh?
4 Su'aalood oo Weydiiso Booqdaha Websaydhkaaga
Sep 18, 2008 at 5: 19 PM
Waan heshiin kari waayey wax badan, Douglas. Qoraalkaaga waxaa taageeray shaqooyinka Szymanski iyo Henard oo daabacay maqaal 2001 oo ay ku ogaadeen in xaaladaha qaarkood rajooyinka uu macaamilku qabo ay ka muhiimsan yihiin go'aaminta qanacsanaantooda marka loo eego waxqabadka!